Soo dejisan WPS Office 10.1.0.5671 – Windows – Vessoft
Scribus 1.4.7 Standard iyo Portable
Ku haboon qalab si aad u eegto, nuqul ka oo daabacan waraaqaha ee doc ama docx qaabab. Software ka shaqeeya iyada oo aan ku rakibidda Microsoft Word.
The DJ-studio si ay u abuuraan darey muusikada iyo keegag la tiro balaadhan oo ah qalab. Software wuxuu hubinayaa tayada dhalmo codka of qaabab kala duwan oo maqal ah.
Tani waa qalab lagu falanqeynayo dhibcaha xadhigga wireless iyo qaadaan tallaabooyin gaar ah si ay u hagaajiyaan calaamadaha daciifka ah ee laga helo Wi-Fi ama goobaha WLAN.